Amaanka magaalada Dhuusmareeb oo aad loo adkeeyay iyo shir ka furmaya halkaas | Star FM
Home Wararka Soomaaliya Amaanka magaalada Dhuusmareeb oo aad loo adkeeyay iyo shir ka furmaya halkaas
Amaanka magaalada Dhuusmareeb oo aad loo adkeeyay iyo shir ka furmaya halkaas
Waxaa aad loo adkeeyay amniga magaalada Dhuusamareeb ee Caasimadda Maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug, halkaasoo la filayo inuu ka furmo shir u dhaxeeya Madaxda dowladda dhexe, Maamul goboleedyada & gobolka Banaadir.
Shirkaan oo uu iclaamiyay Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/aalhi Farmaajo ayaa waxaa looga arrinsanayaa doorashooyinka dalka oo weli uu muran ka taagan yahay iyo sidii xal looga gaari lahaa.
Wararka laga helayo Magaalada Dhuusamareeb ayaa waxay sheegayaan in halkaasi laga dareemayo u diyaar garoowga shirka, isla markaana wadooyinka qaar iyo Xarumaha maamulka lagu arkayo ciidamo ka tirsan dhexe & kuwa Galmudug oo amniga xaqiijinaya.
Mas’uuliyiin ka tirsan Maamul Goboleedka Galmudug ayaa waxaay sheegeen inay u diyaar garoobeen marti-gelinta shirka, iyadoo mas’uuliyiin uu horkacayo Wasiirka Warfaafinta Galmudug Axmed Shire Falagle oo ku sugnaa Muqdisho ay dib ugu laabteen Magaalada Dhuusamareeb.
Qaar ka mid ah shacabka ku nool Magaalada Dhuusamareb iyo Mas’uuliyiin Maamulka Ka tirsan ayaa waxay soo dhaweeyeen shirka berri ka furmaya Dhuusamareeb sida uu qorshuhu yahay waxayna sheegeen inay wax badan oo wanaagsan ka filayaan.
Saacadaha soo socda ayaa waxaa la filayaa in magaalada Dhuusamareeb ay gaaraan wufuud ka kala socda dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo Maamul Goboleedyada, kuwaaasoo horudhac u ah Madaxda sare ee dowladda & maamulada ee shirka ka qeyb-galaya.
Shirka lagu wado inuu Barri ka furmaya Magaalada Dhuusamreeb ee uu madaxweynaha Soomaaliya Iclaamiyaya yaa noqonaya kii 4 aad ee Magaaladaas lagu qabto waxaana Horay uga dhacay Shirarkii dhuusamareeb 1 dhuusamareeb 2 iyo Dhuusamareeb Sadex oo dhamaantooda looga hadlayay arimaha doorashooyinka qaranka waxaana la filayaa in shirkaan ay ka soo baxaan qodobo xal u noqon kara doorashada Muranku hareeyay ee Soomaaliya oo waqtigeedii dib uga dhacday.
Previous articleDHAGEYSO:Wasiirka dowlad wadaajinta oo baaq u diray siyaasiyiinta jago raadiska ah
Next articleDHAGEYSO:Taliyaha Ciidanka dhulka Soomaaliya oo kormeeray fariisimaha ciidanka ee gobolka Gedo